zvinhu zvenaironi 6 DTY Yarn yekuKona chena uye mavara 70D / 24F - China Nylon 6 DTY Yarn yekuKona chena uye mavara 70D / 24F Mupi,Chigadzirwa -ZLTT
Dhirowa mameseji yerudzi
Rubber Yakavharwa yarn
Yakakwira Elastic Yarn
Fully Drawn Yarn / FDY
Yira Kune Mashizha
Yira Ye underwear
Yira Yeni Mucheka
Ranga Kune Towel
Yarn Ye Embroidery
Yarn Yese Kusona Kubatanidza
Yira Kune Masokisi
Nylon Dhizaina mavara
Polyester Dhizaina mavara ejira
Polyester Yakavharwa yarn
Nylon Yakavharwa yerudzi
Filament Yakafukidzwa yarn
Cotton yakafukidzwa yarn
Yakaputirwa kaviri yarn
Mhepo Yakavharwa Yarn
Latex Yakafukidzwa Yarn
Spandex Yakafukidzwa Yarn
Lycra Spandex yakafukidzwa yarn
Lycra Rubber yakafukidzwa yarn
zvinhu zvenaironi 6 DTY Yarn yekuKona chena uye mavara 70D / 24F
Minimum order huwandu:
15 matani pazuva
Paramita uye hunhu
100% zvinhu zvenaironi
Raw White / Raw Matema / Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Mafuta ari mukati:
2-4 % / Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
3-4.5 Cn / dtex / Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Yarn ye sock / hosiery / panty-hose / isina kupfeka / gurovhira / yakarukwa jira / / kupfeka kwemitambo / Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
Isu tinoteedzera chirongwa chekuvandudza girini yakaderera-kabhoni uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Kugara uchisimbirira pane 'mutengi-anotarisana’ uzivi hwebhizinesi, kugadzira bhizinesi-rinoponesa uye nharaunda-inoshamwaridzana bhizinesi rine mhando danho re 'mhando yehupfumi hwepamberi, uye kugutsa vatengi zvichiramba.
Kupfuurisa 10 makore ekugadzirwa uye ruzivo rwebasa.Owns nyanzvi yekugadzira tekinoroji, timu yemhando yepamusoro, uye vashandi vane hunyanzvi uye vakagadzikana vemaindasitiri.
Isu tiri kunyanya kuita mukugadzira uye kutengesa kwe （Pa6 / Pa66 / Pet） FDY, POY, DTY, Yakavharwa Yarn, Rubber Yakavharwa Yarn, Lycra Yakafukidzwa yarn uye inopa yakakwirira mhando zvinhu zvemhando dzose zvemachira.
Kutungamira makambani mumasokisi uye michina inotenderera, pamwe chete kukurudzira itsva chigadzirwa kuvandudzwa, kutungamira maitiro ekuvandudza kweindastiri, uye kuve nemukurumbira wakanaka muindastiri.
Paramueter uye hunhu
Iyo ruvara ruvara ndapota taura kune yedu fekitori kadhi kadhi(ZHENGDAO),Pantone yemakadhi kadhi kana MIYAMA kadhi yemuvara.Kana iwe uchida mamwe mavara, ndapota tumira iyo mhando yemuenzaniso kwatiri.
Vatariri vakasiyana vemakomputa vane kufambisa. Saka usangotumira mufananidzo, isu hatizive icho ruvara rwaunoda.
Ndokumbirawo utarise kukambani yemuvara wefekitori(ZHENGDAO), Pantone yemavara kadhi kana MIYAMA ruvara kadhi.Or tumira iyo mhando muenzaniso kwatiri zvakananga.
1. Q: Uri iwe unogadzira kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri Kambani yekutengesa uye Kugadzira. Tinogamuchirwa kuti mushambire nyika yedu.
Google mepu nzvimbo (29.607289, 120.137993)
2. Q: Tinogona kuwana samples？
A: Ehe, tinokwanisa kupa samples dzemahara pakukora 0.5cm, mari yekutakura inobhadharwa newe.
(1) Iwe unogona kupa yako / / c seDHL kana FEDEX kana TNT.
(2) Unogona kufonera muroora wako kuti atore kuhofisi yedu.
(3) Iwe unogona kutibhadharira iyo Express mhosva nePay Pal.
3. Q: Kutakura uye kutumira?
A: Mabhegi emukati epurasitiki ehubhu imwe neimwe, Outer carton mabhokisi, kana maererano nechikumbiro chako.
2075 4050 Nguo yokusonesa polyester andapeni dzakafukidzwa yakakwirira kwakavharwa nenyama mutsvuku
3075 Polyester Yakavharwa yarn tsika yakagadzirwa
68D72F DTY / Dhizaina mavara akaiswa mutsipa / Polyester
3075 Makara akapenya eSokisi nyowani
Copyright © 2019 Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.